Posted by ကလိုစေးထူး at 10:44 AM
ကော်လာဖိုး ဖြေသလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကော ပြန်ဖြေဖူးလား ကိုတူးရင်း :) ( အယ်ကွဲ့ ဘာပြောကောင်းမလဲ ပြန်ချင်တာ ၂ ပိုင်းသေ လို့ ဟဟား )
ဘလော့ဂါနဲ့ အိမ်နီးချင်းဖြစ်ရတာ မလွယ်ဘူးနော့။
Jan 31, 2009, 11:37:00 AM
ကော်လာဖိုးလို ရိုးသားတဲ့သူတွေ အဲဒီမှာ ဘယ်လောက်တောင် စိတ်ကျဉ်းကြပ်မလဲဗျာ... သူတို့တွေ ပြန်ခွင့်ရတဲ့အခါ သိပ်ပျော်နေမလား.. ဒါမှမဟုတ် ၀မ်းနည်းသွားမလား...
အဲ့ကွယ် .... ကိုတူလင် ... အဲလေ မှားသွားလို့
အိမ်လာလည်ရင် ဘလော့ထဲအရေးခံရမှာ အသေအချာဘဲ
တော်သေးတယ် ဒီတခါဓါတ်ပုံမရိုက်ထားလို့ ....
အဲ့ကွယ် ... မပြောတော့ပါဘူး ... ကိုတူလင်
Jan 31, 2009, 2:18:00 PM
ကော်လာဖိုး သူဘလော့ ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာကျော် နေတာသိရင် အံ့သြဦးမှာလား မသိ
Jan 31, 2009, 4:34:00 PM
Jan 31, 2009, 6:05:00 PM
အီး..........ကျွန်တော်တို.လည်းပြန်ချင်တယ်ဗျာ။ ချင်ခါပူ ဘယ်လောက်ပဲတိုးတက်တိုးတက် မပျော်ပါဘူးဗျာ။
Jan 31, 2009, 9:14:00 PM
Feb 1, 2009, 1:20:00 AM
ပြန်တော့ပြန်ချင်တာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့်....။ (အဟက်ဟက်ဟက်)
Feb 1, 2009, 1:47:00 AM
>>>> ဖြန့်ဝေခြင်း..... ကိုစေးထူးဘလော့ဂ်မှာ ကျနော်ဖတ်ပြီးသားပါ။ သို့သော်လည်း လာရောက်ဖြန့်ဝေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ဒီကိစ္စမျာ အိမ့်ချမ်းမြေ့နဲ့ သဘောထားချင်း တိုက်ဆိုင်ပါတယ်။
မောင်ပေါ၏ ဘလော့မှ မောင်ပေါဖြေရှင်းချက်စာသား များကို စာဖတ်သူပရိသတ်များ သိရှိနိုင်စေရန်ဖြန့်ဝေသည်။
အိမ့်ချမ်းမြေ့၏ စာကို အောက်ရှိ မှတ်တမ်းတင်အပ်သောဘလော့ကော်မန့် ၁၈၀ ကျော်အောက်တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်လည်း အင်းယားကန်လေးကို လွမ်းသွားပြီ :(
Feb 2, 2009, 10:42:00 PM
Hope we all can bringagood fortune to our motherland.
Feb 3, 2009, 6:50:00 AM
Even in Paris and Rome, let me go home.
I am lucky I know but let me go home. I wanna come home.
*Home* by Westlife.
Feb 5, 2009, 9:12:00 AM
ကိုတူလင်ရေ .. အဲဒီကော်လာဖိုးလို တခေါခေါနဲ့ အိပ်ပျော်နိုင်တဲ့ဘဝများတော့ အားကျလိုက်ပါဘိ
Feb 8, 2009, 10:22:00 AM